Izingane zikhula ngokushesha, futhi akhula ngokushesha futhi sinakekele izidingo zabo. Futhi hhayi nje izingubo nokuzilibazisa, kodwa futhi ukuklama emagumbini abo. Qala ekudaleni uhlelo olusha izingane ingaphakathi sika Igumbi ngezisusa inhlangano embhedeni ethokomele. Ngakho-ke, okokuqala kunakho konke, kufanele ukhulume ngalokho kufanele kube eliphezulu embhedeni ingane.
Yini okufanele mina cabanga?
Okokuqala, umbhede kufanele ibe isizinda eyeve eshumini nambili okuqinile futhi kwenziwe izinto zemvelo. Ngokuvamile njengoba indawo yokulala, abazali abaningi bakhetha ukuthenga izingane zabo alo SOFAS noma armchairs transformers. Nokho, izazi zikholelwa ukuthi umuntu afe esemncane balale ngaphandle kwefulethi, ebusweni ngokuphelele bushelelezi. Ngakho it is kangcono le njongo eziklanyelwe lolu embhedeni intsha: amantombazane noma abafana - akunandaba.
I izici eziyinhloko ifenisha zezingane
Kunconywe eyeve eshumini nambili embhedeni obuphelele - mayelana 190 cm ububanzi -. 120 cm Ukuba-ke kufanele kube hhayi ngaphansi kuka-40 cm kusukela phansi.
Kungcono ukukhetha embhedeni base ngesimo ohlakeni lokhuni ne emapheshana enamathiselwe kuso. Lokhu ebhentshini elingaphansi isimo sikuvumela kusukela umbono zempilo: idlala indima umantilasi Bamathambo isekela yomgogodla sikhundla lengiyo.
Indaba kufanele ukhethe for izinkuni zemvelo noma MDF. Kufanele siqonde ukuthi embhedeni chipboard ingane kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu ngisho yingozi umzimba wengane. Ngaphezu kwalokho, ukuphila kwabo konke ifenisha kuyinto ephansi kakhulu, kuyilapho embhedeni izinkuni uma isetshenziswa kahle, uyakwazi iminyaka cishe abangamashumi amabili.
Amamodeli lemibhede entsheni kunabaningi kangaka namuhla: kusukela ejwayelekile Transformers ezikhangayo. Ngokwesibonelo, umbhede kanye itafula, ithoyizi amabhokisi, emadeskini noma ikhompyutha imfashini ngakho muva nje Loft embhedeni. Kodwa kanjani abazali uma ungabuyiseli eyodwa kodwa izingane ezimbili? Futhi zombili izingane ikamelo? Nge lo msebenzi ukubhekana kahle embhedeni Nengane nge eziyizitezi ezimbili. Lokhu ifenisha enemisebenzi ngeke kuphela amandla wonke ingane ukuba libe nendawo yalo ukuze siphumuze ingqondo, kodwa futhi kukusiza ukuba kakhulu wonge isikhala. embhedeni okunjalo embhedeni eyeve eshumini nambili kungenziwa umshini wokuphehla emashalofini, esakhelwe kufanale agqoke izikhindi zangaphansi + nezibani. Nokho, into ebaluleke kakhulu okufanele sicatshangelwe lapho ukuthenga ucezu ezinjalo ifenisha - kuba ukuphepha kwakhe. Isihlanganisi engenhla imibhede kumele njalo ifakwe amabhampa.
Mangisho ukuthi abakhiqizi yesimanje anikele design pretty ngokugqamile izixazululo ifenisha zezingane. Ububanzi ubanzi kangangokuba ngisho ingane ezingezwakali kakhulu futhi ezimele ungakhetha inketho ukushintshwa, bobunjwa nemibala. Lapho ekhetha imibala, ungakhohlwa mayelana nokuthi ezihlukile kungathinta isimo jikelele lomuntu. Ngokwesibonelo, ezinemibala egqamile athokozise futhi kubekhona engqondo. Soft, shades ethule athobe, uphumule futhi uzivumelanise ukuphumula ngokwanele.
Ifenisha ngesitayela angadle ngabuhle obutheni
Vodka Museum. History of the isiphuzo Russian
Ultrasonic yokuhlanza kwamazinyo professional temlomo uhlelo inhlanzeko